वीरगंजका सटही काउन्टरहरूमा नेपाली रुपैयाँको अवमूल्यन
प्रस, वीरगंज, १६ वैशाख/ वीरगंजस्थित अधिकांश सटही काउन्टरहरूले अहिले नेपाली रुपैयाँको अवमूल्यन गर्दै गैरकानुनीरूपमा भारु सटहीको बट्टा लिइरहेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले वीरगंजमा रहेका करिब ३० वटा सटही काउन्टरहरूलाई पछिल्लो समयमा साप्ताहिकरूपमा १५ देखि ४० हजारसम्म भारु उपलब्ध गराउँदै आएकोमा उक्त भारु ग्राहकलाई दिंदा सटही काउन्टरहरूले सयकडा ८ रुपैयाँसम्म बट्टा काट्ने गरेको छन्। राष्ट्र बैंकको नियमानुसार सटही काउन्टरहरूले सयकडा १५ पैसादेखि बढीमा ४० पैसासम्म सटहीबापत शुल्क लिन पाउने व्यवस्था छ। विगत तीन वर्षदेखि भारुको अभाव भएपछि वीरगंज र रक्सौल क्षेत्रमा नेपाली रुपैयाँको अवमूल्यन बढेको छ। सीमावर्ती भारतीय बजारमा नेपाली मुद्राको अवमूल्यन भएकोमा चिन्तित ग्राहकहरू हाल वीरगंजकै सटही काउन्टरहरूबाट ठगिएका छन्। रक्सौल बजारका व्यापारीहरूले सयकडा ६ रुपैयाँसम्म सटहीबापत रकम लिंदै आएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले सटही काउन्टरहरूलाई साप्ताहिकरूपमा मात्र भारु उपलब्ध गराउने गरेका छन् भने राष्ट्र बैंकको काउन्टरमा पुग्ने ग्राहकहरूलाई जनही २ हजारसम्म भारु उपलब्ध गराउँदै आएको छ। भ
काङ्ग्रेस मधेसीको पार्टी– देउवा
सिकेन्द्र पासवान, कलैया १६ वैशाख/ नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपाली काङ्ग्रेस मधेसीको पार्टी भएको बताएका छन्। कलैया–६ स्थित नवनिर्मित नेपाली काङ्ग्रेस बाराको वीपी स्मृति भवनको उद्घाटन एवं वीपीको सालिक अनावरण कार्यक्रमको अवसरमा श्री ३ चन्द्र उच्च माविको परिसरमा नेपाली काङ्ग्रेस बाराले आयोजना गरेको आमसभालाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख अतिथि देउवाले काङ्ग्रेसको जन्म मधेसमैं भएकोले मधेसी जनताको हकअधिकारका लागि काङ्ग्रेस प्रतिबद्ध रहेको बताए । मधेसवादी दलका नेताहरूले मधेसको नाममा मधेसी जनतालाई धोका दिंदै सत्तामा पुगी आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्ने गरेको आरोप लगाउँदै मधेसीको कल्याण नेपाली काङ्ग्रेसले मात्र गर्नसक्ने दाबी नेता देउवाले गरे। एमाओवादी देशको बारेमा नसोची सत्ताकब्जा गर्ने खेलमा मात्र लागेको आरोप लगाउँदै नेता देउवाले बन्दुकको भरमा शासन गर्ने तानाशाहहरू विश्वमा प्रशस्त भएका उदाहरण दिंदै हत्या र हिंसाको राजनीतिक त्याग्न एमाओवादीलाई आग्रह गरे। मुलुकमा स्थायी शान्ति कायम गर्दै सबैको हकहित सुनिश्चित गर्ने एकमात्र विकल्प संविधानसभाको चु
राष्ट्रपति रनिङशिल्डमा गौरीशङकर प्रथम
प्रस, पथलैया, १६ वैशाख/ निजगढमा सञ्चालन भइरहेको विद्यालयस्तरीय राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगितामा गौरीशङकर उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रथम भएको छ। प्रतियोगितामा नेपाल राष्ट्रिय उच्च माध्यमिक विद्यालय रतनपुरी द्वितीय र जनजागृति उच्च माध्यमिक विद्यालय सखुवाघाट तृतीय भएको छ। जिल्ला खेलकुद विकास समितिद्वारा सञ्चालित प्रतियोगिता अन्तर्गत सोमवार सम्पन्न अन्तिम दिनसम्ममा सात स्वर्ण, आठ रजत र एक कास्य जित्दै गौरीशङकरले पहिलो स्थान हासिल गरेको छ। प्रतियोगितामा ९८ अङक प्राप्त गरेको गौरीशङकरका छात्रछात्राहरूले एथलेटिक्सका विभिन्न प्रतिस्पर्धामा पदक जितेका थिए। प्रतियोगितामा दोस्रो भएको रतनपुरीले ७८ अङकसहित पाँच स्वर्ण, चार रजत र पाँच कास्य पदक जितेको थियो। यसैगरी छ स्वर्ण, दुई रजत र चार कास्य जितेको जनजागृतिले तृतीय स्थान हासिल गरेको छ। प्रतियोगिता अवधिभर छ स्वर्ण जिते पनि अङकका आधारमा जनजागृति तृतीय भएको हो। जनजागृतिले ६८ अङक जोडेको थियो। तीन दिनसम्म सञ्चालन भएको प्रतियोगितामा जिल्लाभरिका १५ विद्यालयबाट दुई सय विद्यार्थीहरूको सहभागिता थियो। प्रतियोगितामा छात्र र छात्रातर्फ विभिन्न दूरीक
विवरण ढाँटेर भारतीय नागरिकलाई नेपाली वंशजको नागरिकता दिलाउने नेपाली नक्कली बाबु र नागरिकता लिन खोज्ने भारतीय नागरिक पक्राउ परेका छन्। यसैबीच गैरनागरिकलाई नागरिकता दिलाएको प्रकरणमा पूर्वमन्त्री करिमा बेगममाथि कारबाई चलेको छ। पूर्वमन्त्री बेगमले पर्सा जिल्ला अदालतमा हालै १५ हजार रुपैयाँ धरौटी बुझाएकी छिन्। एक कानुन व्यवसायीले मुद्दा दायर गरेपछि अदालतले कारबाई प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो। नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न चाहनेहरूमा अधिकांश भारतीयहरू देखिएका छन्। नेपाल–भारत खुला सीमा छ। पश्चिम बङगाल, बिहार, उत्तरप्रदेश, छत्तीसगढ र अरुणाञ्चल प्रदेशको नेपालसँग सीमा जोडिएको छ। खुला सीमा जोडिएकाहरूमध्ये बिहार राज्यका बासिन्दाहरू नेपाली नागरिकता काण्डमा मुछिएका धेरै पाइन्छन्। नागरिकता वितरणका लागि घुम्ती टोली खटेको छ। अघिल्लोपटकको टोलीले नेपालमा जन्म भई निरन्तर बसोबास गर्दै आएकाहरूलाई जन्मसिद्ध नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गरेको थियो। विदेशमा जन्मिए पनि लामो समय नेपालमा बसेका र अरू मुलुकको नागरिकता नलिएका व्यक्तिहरूलाई पनि नेपाली नागरिकता दिनुपर्ने माग त्यसताका निकै बढेको थियो। उक्
गैरनागरिकलाई नागरिकता दिलाउनुको जोखिम
अधिवक्ता वीरेन्द्र प्रसाद यादव २०६३ सालमा अत्यधिक गैरनागरिकले नागरिकता लिएर मुलुक र जनतालाई पारेको अप्ठ्यारोको समाधान नहुँदै फेरि नागरिकता वितरण हुँदैछ। यसपालि पनि विगत जस्तै दश/बीस हजार रुपैयाँमा नागरिकता दिने दिलाउने धन्दा द्रुतगतिमा बढेको समाचार सार्वजनिक भइरहेको छ। सात वर्षअगाडि मात्र गरिएको गल्तीको सुधार नगरी पुन: त्यही गल्ती दोहोर्‍याउनु देश र जनतासित ठूलो बेइमानी हो। नजानी गरिएको गल्ती माफीयोग्य हुनसक्छ तर जानीजानी गरिएको गल्ती ठूलो अपराध हो, जसमा सजायको भागी भइन्छ। विगतको नागरिकता वितरणमा कतिपय राजनीतिकर्मी, कर्मचारी तथा भद्रभलादमीहरूलाई अदालतले सजाय गरेको छ। केही महिनाअगाडि मात्र पर्सा जिल्ला अदालतले एउटा नागरिकता बदर गर्दै गाविस सचिव र गाउँले भद्रभलादमीलगायतलाई जरिवाना गरेको थियो। अद्यापि कति मन्त्रीस्तरका राजनीतिकर्मी अभियुक्त बनेका छन्। नागरिकतासम्बन्धी अपराध फौजदारी अपराध हो, जसमा सानो सजाय भएपनि सरकारी सेवालगायत राजनीतिक पदको लागि पनि अयोग्य ठहरिन्छ। चुनाव पनि लड्न सकिंदैन। यस किसिमको जोखिम थाहा पाएर पनि गैरनागरिकलाई नागरिकता दिलाउनमा सहयोग गर्नु ठूलो जोखिम मोल्नु
उपहार योजनाको नाममा ठगी गर्ने पक्राउ
प्रस, वीरगंज, १५ वैशाख/ जिल्ला प्रहरी कार्यालय, पर्साले उपहार योजनाको नाममा आमउपभोक्तालाई ठगी गरिरहेका श्रीकृष्ण ट्ेरडर्सका तीनजनालाई पक्राउ गरेको बताएको छ। आज पत्रकार सम्मेलन गरी प्रहरीले गोप्य सूचनाको आधारमा फर्निचर उत्पादन तथा बिक्री वितरण र साइकल खुद्रा व्यापार गर्ने उद्देश्यले आन्तरिक राजस्व कार्यालय, वीरगंजबाट इजाजत लिएर वीउमनपा–१७ बस्ने सन्तोषकुमार भेडियार (पाल)ले श्रीकृष्ण ट्ेरडर्सको नाममा गैरकानुनी तरिकाले उपहार योजना सञ्चालन गरिरहेकोमा प्रहरीले छापामारी गर्दा तीनजना पक्राउ परेका बताएको छ। प्रहरीले वीउमनपा–१३ मा रहेको उक्त ट्ेरडर्समा खानतलासी गर्दा वीउमनपा–१ बस्ने हसमुल्लाह मियाँ, महम्मद सलमान शेख र बारा जिल्ला, दोहोरी गाविस–७ बस्ने सुरेशकुमार सहनी पक्राउ परेका बताएको छ। प्रहरीले वडा नं. १ बस्ने मियाँ र शेख उक्त ट्ेरडर्समा काम गर्ने कामदार भएका र सहनी उपहार योजनाका एजेन्ट भएका ट्ेरडर्समा काम गर्ने मियाँको बयानबाट खुलेको बताएको छ। प्रहरीले सहनीले ६६ वटा ग्राहकबाट ५२ हजार रकम सङकलन गरेको र ट्ेरडर्समा ३५० जना ग्राहक रहेका बताउँदै खानतलासीको क्रममा ग्राहक चिठ्ठा उपह
सुनचाँदी व्यवसायीको आफ्नै दररेटमा सुनको बिक्री
प्रस, वीरगंज, १५ वैशाख/ वीरगंजका सुनचाँदी व्यवसायीहरूले आफ्नै दररेट कायम गरी बिक्री वितरण गर्दै आइरहेका छन्। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी सङ्घ, काठमाडौंले गत शुक्रवारकै दररेट तोलाको ५३ हजार आज पनि कायम गरेकोमा वीरगंजमा भने सो दररेटमा बिक्री भइरहेको छैन। वीरगंजमा तोलाको ५६ हजारमा गत शुक्रवारदेखि सुन बिक्री भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी सङ्घ, पर्साका अध्यक्ष रामरतनप्रसाद सर्राफले बताए। उनले तोकिएको दररेटमा राजधानीमा पनि सुन बिक्री नभइरहेको दाबी गरे। वाणिज्य बैंकहरूले दैनिक १५ किलो सुन बिक्री गर्दै आएपनि सो सुनमाथि तस्करहरूको कब्जा रहेको तथा भारत र चीनबाट तस्करी गरी ल्याइएको सुन खरिद गरी बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति भएकोले घट्दो दररेटमा सुन बिक्री गर्न नसकिएको उनले प्रस्ट्याएका छन् । अध्यक्ष सर्राफले वाणिज्य बैंकहरूले सुन व्यवसायीहरूलाई सय/सय ग्रामको दरले सुन उपलब्ध नगराउन्जेलसम्म सुनको कारोबार सही ढङगबाट नहुने र तोकिएको मूल्यमा उपलब्ध गराउन नसकिने बताए। अध्यक्ष सर्राफले वीरगंज मात्र नभएर देशका अन्यत्र स्थानमा पनि सुनको मूल्य स्थानीय तहमा कायम भई खरिद–बिक्री भइरहेको जा
राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रनिर्माण– आजको प्रमुख आवश्यकता
अनन्तकुमार लाल दास नेपाललाई बुद्ध र जानकीको देश भनेर पनि चिनाउने गरिन्छ। राजतन्त्रात्मक सत्ता हुँदा हरेक नेपालीले शान्तिको अनुभूति गरेका थिए। परिश्रम गर्ने मानिसलाई सम्मान गरिन्थ्यो। हाम्रो भाषा एक थियो। छिमेकी मुलुकका मानिसले पनि नेपालको गरिमाको बखान गर्दथे। “हाम्रो देश प्राणभन्दा प्यारो छ” भन्ने नारा नै चलेको थियो तर त्यसबेला अधिकांश जनता अशिक्षित थिए। उनीहरू आफू शोषित भइरहेका कल्पना नै गरेका थिएनन्। विस्तारै ज्ञानको विस्तार हुँदै जाँदा उनीहरू कसरी शोषित भइरहेका छन् भन्ने थाहा पाएपछि विसं २००७ सालमा भएको क्रान्तिले “प्रजातन्त्र” भन्ने शब्द त प्राप्त भयो तर वास्तविक प्रजातन्त्र प्राप्त गर्न सकेनन्। विस्तारै यो प्रजातन्त्र राजा र स्वार्थी नेताहरूका षड्यन्त्रले पञ्चायती शासन व्यवस्थामा परिणत भयो। “गाउँ फर्क अभियान” जस्ता कार्यक्रम ल्याइयो तर गाउँको विकास हुन सकेन। पुन: २०४६ को जनआन्दोलनबाट प्रजातन्त्रको स्थापना भयो तर त्यो पनि गुम्यो। शिक्षाको अभाव, पछौटेपन, चरम शोषणको परिणामस्वरूप पुन: जनआन्दोलन गरियो, जसमा कैयन वीर नेपालीले आफ्नो जीवन राष्ट्रलाई समर्पित गरे। नेपालको १७ प्रतिश
चुनावी मुद्दा सङ्घीयता
संविधानसभाको दोस्रो चुनावका लागि तिथि नतोकिए पनि मुलुकमा चुनावी चहलपहल शुरू हुन थालेको छ। चुनाव पक्षधर राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ताहरू हरेक मञ्च तथा कार्यक्रमहरूलाई चुनावी कार्यक्रमको रूपमा परिणत गरिरहेका छन्। यसपटकको चुनावमा सङ्घीयताको नारालाई नै दलहरूले मुख्यरूपमा उठाउने सङकेत देखाएका छन्। यसर्थ उनीहरू सङ्घीयताको नारा दिंदै जनताको बीचमा आइरहेका छन्। अहिले असल सङ्घीयताको पक्षधर देखाउन दलहरूबीच प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ। तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले आफ्नो दलले चुनावको मुख्य मुद्दा सङ्घीयतालाई बनाएको बताउँदै तमलोपा मात्र एक असल सङ्घीयतावादी दल भएको प्रचार गर्न व्यस्त छन्। त्यसैगरी एमाओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड एमाओवादी मात्र सङ्घीयतावादी पार्टी भएको र उसको पछाडि अरू दल लागेको दाबी गर्दैछन्। नेपाली काङ्ग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले एमाओवादी र एमाले सङ्घीयताविरोधी भएको आरोप लगाउँदै नेपाली काङ्ग्रेस मात्र सङ्घीयताको पक्षधर भएको जिकिर गर्न पछि परेनन्। संविधानसभाको पहिलो चुनावले दिएको दुई वर्षे अवधिलाई चार वर्ष बनाउँदा पनि दलहरूले संविधाननिर्माण गर्न सकेनन
म मधेसबाट चुनाव लड्छु– प्रचण्ड
प्रस, वीरगंज, १४ वैशाख/ एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आगामी संविधानसभाको निर्वाचनमा आफू मधेसबाट चुनाव लड्ने घोषणा गरेका छन्। एमाओवादी पर्साद्वारा पोखरिया गाविसमा आयोजित आमसभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले एमाओवादीले सदैव मधेसको हित चाहेको दाबी गरे। उनले मधेसीलगायत शोषित पीडितहरूका लागि आवाज उठाउने कार्य एमाओवादीले गरेको पनि बताए। सङ्घीयताको पक्षमा एमाओवादीपछि नै अरू पार्टीहरू लागिपरेको दाबी गर्दै उनले एमाओवादी सङ्घीयताको पक्षधर भएको र मधेसले पनि सङ्घीयता चाहेको बताए। उनले मधेसको विकासका लागि एमाओवादी पार्टीलाई अत्यधिक सङ्ख्यामा विजयी बनाउनका लागि पनि अपिल गरे।
Location: prateek dainik, Shreepur, Birganj 44300, Nepal
एमाओवादी र एमालेले सङ्घीयता नचाहेको– नेता पौडेल
प्रस, वीरगंज, १४ वैशाख/ नेपाली काङ्ग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले एमाओवादी र एमालेले सङ्घीयता नचाहेको आरोप लगाएका छन्। नेपाल प्रेस युनियन पर्साद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उपसभापति पौडेलले कम्युनिस्टहरू सङ्घीयताको पक्षधरमा नभएका आरोप लगाए। उनले सङ्घीयताको बढी रटान गर्नेहरू अहिले निर्वाचन भाँड्नेमा लागेका उनको भनाइ थियो। उनले नेकपा– माओवादी र मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालको विरोधका बावजुद निर्वाचन नरोकिने र मङ्सिरको पहिलो सातामा निर्वाचन हुने ठोकुवा गरे। उनले विरोधमा रहेका वैद्य र यादवलाई उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रमा समाहित गर्ने तयारी भइरहेको पनि बताए। उपसभापति पौडेलले निर्वाचन जुनसुकै अवस्थामा हुने बताउँदै निर्वाचनको तयारीमा जुट्नका लागि कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन पनि दिए । राजनीतिक दलहरूले एकअर्कालाई विश्वास गर्ने वातावरण नहुँदा कर्मचारीको जिम्मामा निर्वाचन गराउने बागडोर सुम्पिएको बताउँदै उनले यो सरकारले निर्वाचन गराउने कुरामा शङका नगर्न भने।
Location: Shreepur, Birganj 44300, Nepal
विद्यालयमा दिइने यातनाको असर
शिक्षाको उज्यालो ज्योतिले जीवनको अन्धकारलाई हटाइ सुन्दर बिहानीको किरण ल्याउँछ। शिक्षाले मानिसलाई आफ्नो अधिकारप्राप्तिमा क्रियाशील मात्र होइन अन्यायविरुद्ध आवाज घन्काउन आत्मविश्वास बलियो पार्छ। शिक्षाले काम, कर्तव्य र जिम्मेवारी वहन गर्ने गोरेटोमा सहयात्री भई साथ दिन्छ। मानिसको जीवनमा मार्गनिर्देशनको भूमिका निर्वाह गरिरहेको हुन्छ। बालबालिकामाथि गरिने कुनै पनि हिंसा अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता भए तापनि त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न सकिएको छैन। बालबालिकामाथि घर तथा विद्यालयमा दिइने शारीरिक तथा मानसिक यातनाले चरमरूप धारण गर्दै गइरहेको छ। घरमा बदमासी वा नपढेमा विद्यालयमा शिक्षकसँग आफ्ना बालबालिकालाई दण्ड दिनको लागि अभिभावकले आग्रह गर्ने गरेको पाइन्छ । यस्तो प्रवृत्तिले बालबालिकामा अनुशासन र पढाइमा प्रगति ल्याउनको लागि शिक्षकहरूले निर्धक्कसाथ कठोर शारीरिक दण्ड दिन्छन्। बालबालिकालाई दिइने विभिन्नखाले सजायले बालअधिकारको हनन त भएकै छ, यस्तो सजायले बालबालिकाको बौद्धिक विकासमा समेत नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ। हाम्रो समाजमा धेरैजसो बालबालिकालाई सानो उमेरदेखि नै घरैदेखि पिट्
अनुकूलता आर्जित गर्नुपर्छ
संसारका अधिकांश व्यक्ति विपरीत परिस्थितिको दोष लगाइरहन्छन् र सोच्दछन्, यस्तो अनुकूलता प्राप्त भयो भने अगाडि बढ्ने प्रयत्न गर्नेछन्। सबै प्रकारका अनुकूलताको अवसर तिनका लागि जिन्दगीभर प्राप्त हुँदैन र उनीहरू पछौटे, अविकसित स्थितिमैं जीवन गुजार्छन्। यसकाविपरीत साहसी, पुरुषार्थी व्यक्ति परिस्थितिहरू आफ्नो अनुकूल होऊन् भनी प्रतीक्षा गर्दैनन्, अपितु पराक्रमको बलमा स्वयं आफ्ना लागि परिस्थितिको निर्माण गर्दछन्। समय, श्रम र बुद्धिरूपी सम्पदाको सदुपयोग गरेर उनीहरू सफलताको शिखरमा पुग्दछन्। सामान्य व्यक्ति त्यो सफलता देखेर आश्चर्यचकित हुन्छ र आकस्मिक दैवी वरदानको रूपमा स्वीकार गर्दछ, जबकि त्यो स्वयंद्वारा विनिर्मित परिस्थितिहरूको परिणाम हुन्छ । उत्तम मस्तिष्कको चिह्न, उसको सङ्घर्ष, निष्ठा हो, जो सबै प्रकारको परिवर्तन हुँदा पनि कहिल्यै बदलिंदैन, बरु प्रतिद्वन्द्वीहरूको सामना गर्दै आफ्नो लक्ष्यसम्म पुग्दछ। साना मस्तिष्क आपत्तिहरूले थिचिन्छन्, तर ठूला मस्तिष्क तीमाथि विजय प्राप्त गर्दछन्। कठिनाइहरूसँग सङ्घर्ष गरेर जसले आफ्नो सङ्घर्षशीलता प्रकट गर्दछ, उसैलाई साँचो यश प्राप्त हुन्छ। यसलाई प्रा
अनुमतिबेगर माथिल्लो कक्षा सञ्चालन शिक्षा कार्यालय मौन, अभिभावक ठगिंदै
प्रस, वीरगंज, १३ वैशाख/ संस्थागत विद्यालय मापदण्ड तथा सञ्चालन निर्देशिका २०६९ को परिच्छेद २ को २.१.५ अनुसार अनुमति नलिई विद्यालय सञ्चालन गर्न पाइँदैन। सञ्चालन भएको पाइएमा शिक्षा ऐन, नियमबमोजिम जरिवानासहित विद्यालय बन्द गरिनेछ। त्यस्तै २.१.६ अनुसार विद्यालयले प्रत्येक वर्ष एउटा मात्र कक्षा थप गर्न पाउने प्रावधान भए तापनि सोविपरीत वीरगंजका विभिन्न वडाहरूमा सञ्चालित संस्थागत विद्यालयले तल्लो कक्षाको अनुमति लिएर माथिल्लो कक्षा खुलेआम सञ्चालन गरिरहेका छन्। ग्रामीण क्षेत्रका अधिकांश संस्थागत विद्यालयहरू बिनाअनुमति नै सञ्चालनमा छन् । यस सम्बन्धमा प्याब्सन र एन–प्याब्सनले पटक–पटक जिल्ला शिक्षा कार्यालयको ध्यान आकृष्ट गराउँदा पनि जिल्ला शिक्षा कार्यालय मौन छ। बिनाअनुमति सञ्चालित विद्यालयहरूले बर्सेनि लाखौं रकम अभिभावकसँग ठगी गरिरहेका छन्। अभिभावकहरू विद्यालयद्वारा गरिने विज्ञापनको प्रलोभनमा परी यस्ता विद्यालयहरूमा आफ्ना नानीहरूलाई भर्ना गराइरहेका छन्। यस्ता विद्यालयहरूले जथाभावी भर्ना लिने, भर्ना लिंदा स्थानान्तरण प्रमाणपत्र, चारित्रिक प्रमाणपत्र र जन्मदर्ता प्रमाणपत्रसमेत लिने
नागरिकता मुद्दामा पूर्वमन्त्री बेगम धरौटीमा रिहा
प्रस, वीरगंज, १३ वैशाख/ पूर्वमन्त्री करिमा बेगमलाई नागरिकतासम्बन्धी मुद्दामा पर्सा जिल्ला अदालतले धरौटीमा रिहा गरेको छ। वीउमनपा–१६ निवासी चन्द्रदेव यादव भन्ने चनरदेव राउत अहिरकी चार छोरीहरूको नागरिकतासम्बन्धी मुद्दामा सिफारिसकर्ता पूर्वमन्त्री बेगमसँग १५ हजार धरौटी माग गरिएको र बेगमले सो धरौटी बुझाएर रिहा भएकी बताइएको छ। चन्द्रदेव यादवको वंशजको नागरिकता रहेकोमा निजले आफ्नी चार विवाहित छोरीहरूको २०६३ सालको नागरिकता टोलीबाट वंशजको आधारमा नागरिकता जारी गराएको भनी अधिवक्ता दिनानाथ साह तेलीले दिएको रिटमा अदालतले हिजो पूर्वमन्त्री बेगमसँग १५ हजार धरौटी माग गरेको हो। माननीय न्यायाधीश बैधनाथ गुप्ताको इजलासले पूर्वमन्त्री बेगमसँग १५ हजार, चन्द्रदेव यादव र निजका छोरा नवलकिशोर यादवसँग १/१ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको थियो। सोही मुद्दामा आज हाजिर भएका नेपाली काङ्ग्रेसका मन्जुर अन्सारी र एमालेका हीरा गिरीसँग जनही १०/१० हजार धरौटी माग गरिएको र उनीहरू पनि धरौटी बुझाएर रिहा भएका पर्सा जिल्ला अदालतले जनाएको छ। अन्सारी र गिरी उक्त नागरिकता प्रदान गरिंदा रोहबरमा बसेका थिए। अधिवक्ता दिन
हाम्रो परीक्षा– ‘पत्ताबिनाको पान, मकैबिनाको घान’ कहिलेसम्म ?
बैद्यनाथ ठाकुर आजभोलि नेपालमा कानुन छ कि छैन भन्न बडो गार्‍हो छ। प्रत्येक क्षेत्रमा ‘सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन’को उखान चरितार्थ भइरहेको छ। हुनेखानेहरूको लागि हुँदाखानेहरूले दिनरात पसिना बगाउनुपर्ने चलनमा अझै कुनै परिवर्तन भएको छैन। बरु ‘उल्टे चोर कोतवालको डाटे’को उखान सम्पूर्ण क्षेत्रमा व्याप्त छ। जिम्मेवारीहीनता, लापरवाही तथा स्वार्थपूर्ण गतिविधिले प्रत्येक क्षेत्र, तह र तप्कालाई प्रभावित गर्दै लगेको छ। विकृति–विसङगति नै मुख्य सभ्यता र संस्कृतिको रूप लिंदै गइरहेको छ। ....लाई भन्दा देख्नेलाई लाजजस्तै घटनाहरू बारम्बार दोहोरिरहेका छन् । चाँदी तौलिने तराजुमा सुन तौलिरहेको रङगेहात पक्रिएपछि चोरहरूले चोरी गर्न पाउनुपर्छ भनी राजधानीजस्तो ठाउँमा पसल बन्द गरेर नारा जुलुस गरिरहेका छन्। चोरी गर्न पाउने मात्र होइन बरु चोरीको अनुगमन गर्न पाउँदैन भनेर मागसमेत गर्न थालेका छन्। दस हजार तोलाको सुन हेर्दाहेर्दै साठी हजार प्रतितोलासम्म पुग्दा कहिले पनि पसल बन्द गर्ने आवश्यकता सुन व्यवसायीहरूले महसुस गरेनन् तर सुनको भाउ ओरालो लाग्दै गर्दा उनन्चास हजारमा के मात्र झरेको थियो पसल नै बन्द गरेर भागे। उपभ
हुलाकी सडकप्रतिको उदासीनता
मित्रराष्ट्र भारतले सहयोगस्वरूप बनाइदिन लागेको तराई सडक परियोजना अन्तर्गत ठोरी हुलाकी सडक निर्माणाधीन अवस्थामा छ। परियोजनाको पहिलो चरणमा वीरगंज–ठोरी हुलाकी सडक निर्माण हुनु पर्सेली जनताको अहोभाग्य हो। सडकमा पर्ने पुल निर्माण, जग्गा अधिग्रहण, ढुङगा, गिट्टी, बालुवा उपलब्धता र सम्पूर्ण कानुनी प्रक्रियाहरू पूरा गर्ने दायित्व नेपाल सरकारमाथि परेको छ भने सानातिना कल्भर्ट र पुलेसासहितको सडक निर्माणको जिम्मेवारी भारत सरकारले लिएको छ। नेपाल पक्षले आफ्नो जिम्मेवारीको काम पूरा गरेलगत्तै भारतले सडक निर्माण कार्यमा तीव्रता दिनेछ। सडक निर्माणका लागि भारतीय ठेकेदार कम्पनी वीरगंज आएर बसेको १४ महिना बितिसकेको छ। निर्माण प्रारम्भको ३२ महिनाभित्र वीरगंज–ठोरी कालोपत्रे भइसक्ने भारत सरकारले जनाएको छ। नेपालले आफ्नो जिम्मेवारीको काम सम्पन्न भइसकेको जानकारी दिएपछि परियोजना निर्माण कम्पनी वीरगंज आएको हो। हुलाकी सडक निर्माण कार्य प्रारम्भै रोकिएको एक वर्ष पुगिसक्यो। गर्दौलका बासिन्दाले जग्गा मुआबजामा असन्तुष्टि जनाउँदै विवाद खडा गरेपछि विवाद नरहेका केही स्थानमा माटो पुर्ने काम मात्र भएको छ। परियोजना निर्माण
वैज्ञानिक अध्यात्मवाद भनेको के हो ?
सञ्जय साह ‘मित्र’ अध्यात्मको ठूलो स्थान समाजमा रहेको छ। अध्यात्म ज्यादै गहिरो र सतहमा देखिने धर्म तथा धार्मिक गतिविधि भएपनि उच्च बौद्धिकवर्गमा अध्यात्म शब्द बढी प्रचलनमा रहेको छ। अध्यात्मलाई सतहीरूपमा बुझ्नेले यसै कारण धर्म भन्ने गरेका छन्। धर्मलाई त कर्तव्यको रूपमा लिन्छन् कतिपयले। यदि धर्मलाई कर्तव्यको रूपमा मान्ने हो भने अध्यात्मको अर्थ सङ्कुचनभन्दा माथि उठ्छ। अध्यात्म भनेको धर्मको गहिराइ हो कि धार्मिक गतिविधिको गहिराइ हो ? भन्ने विषयमा अनेक थरी मत हुन सक्छन् तर आजभोलि वैज्ञाानिक अध्यात्मवादको चर्चा पनि सुनिन थालिएको छ। गीता पढ्नेले अध्यात्मभित्रको वैज्ञानिक दृष्टिकोण पनि पढ्छन्। रावणको वैज्ञानिक दृष्टिकोण पनि निकै माथि रहेको थियो तर धार्मिक आडम्बरहरूले वैज्ञानिकतालाई कम महत्त्व दिंदै गयो र कालान्तरमा आडम्बर मात्र बाँकी रहयो तथा विज्ञानलाई अध्यात्मको र अध्यात्मलाई विज्ञानको विपरीत अर्थमा लिन थालियो। के भनिन्छ भने जो गतिशील छ, उही बढी टिकाउ हुन्छ। आडम्बर गतिशील हुन सक्दैन, तर विज्ञान त गतिशील छ। यस कारण एकातिर आडम्बरका क्षेत्रहरू विस्तार हुँदै गए र अर्कोतिर तथ्य र तर्कमा वि
अलि ओत त देओस् शहरले !
चन्द्रकिशोर chandrakishore_jha@yahoo.com वीरगंजवरिपरिका बासिन्दाहरूका लागि यो शहर स्वास्थ्य उपचार, घरायसी किनमेल, बाहिर आउनेजाने कामहरूका लागि मुख्य केन्द्र हो। अरू आवश्यकताहरू पनि उनीहरूको वीरगंजमाथि नै निर्भर छ जस्तै पढाइ, प्रशासनिक काम, राजनीतिक सम्पर्क, व्यापारिक प्रयोजनका कामहरू आदि। वीरगंजमा बिहान आएर बेलुका आफ्नो गाउँ फर्किनेहरूको ठूलो सङ्ख्या छ। यसरी गाउँबाट बिहान आउनेहरूमा वीरगंजका विभिन्न प्रतिष्ठानहरूमा काम गर्नेहरू पनि छन्। यस्ता काम गर्नेहरू दुई प्रकारका छन्। एकथरी ज्याला मजदुरी गर्न आउँछन्, जो सधैं काम खोज्छन्। अर्काथरीको मासिकरूपमा कतै निश्चित हुन्छन्। त्यस्तै कोही दही त कोही दूध त कोही तरकारी बेच्न आउँछन् । वीरगंजमा वरिपरिबाट शहर छिर्ने बाटोहरूमा बिहान र साँझपख आउने र फर्किने साइकलहरूको ताँती हेर्ने हो भने त्यसले पनि यहाँ भित्रिने जनशक्तिबारे बताउँछ। वीरगंजको मौसम खासगरी जाडो, गर्मी र वर्षामा धेरै कठिनाइ हुन्छ। जाडोमा शीतलहरले गर्दा कठिनाइ हुन्छ भने गर्मी र वर्षात्मा पनि बाहिरबाट वीरगंज आउनेहरू जो कतै ओत पाउँदैनन्, उनीहरूका अनेकौं समस्या छन् । माईस्थान चोकमा ब
०७ अघि र पछिको नेपाल
सुशील मुडभरी हरेक राष्ट्रका शत्रु र मित्रहरू हुन्छन् । राष्ट्रका कर्णधारहरूले त्यस्ता व्यक्तिहरूको पहिचान गर्दै तिनका बारेमा व्यापकरूपले खोज अनुसन्धान गर्न जरुरी हुन्छ। हचुवाको भरमा अथवा बिनाखोजी नै बोल्दै लेख्दै जाँदा कहिलेकाहीँ शत्रुको प्रशंसा र मित्रको बदख्वाइँ गरिरहेको पनि हुनसक्छ । त्यसैले यस्ता महत्त्वपूर्ण कुरामा सूक्ष्म अध्ययन गर्नैपर्ने हुन्छ। पुराना शत्रुको लागि खोजी गर्न समय खर्च नगरेर मौनधारण पनि गरौंला, तर मित्रको लागि भने ध्यान दिनैपर्छ। असल मित्रका भनाइहरू, व्याख्याहरू, लेख संस्मरणहरू प्रचारप्रसार गर्नाले हामी आपैंmलाई फाइदा पुगिरहेको हुन्छ। उसबखत चीनबाट सद्भावपूर्ण भ्रमणका लागि आर्यभूमि आएका फाइहान, हु एन साङहरू अफगानिस्तानको बाटो हुँदै भारत प्रवेश गरेका थिए। त्यसपछि चिनियाँहरूले के पत्ता लगाए भने तिब्बतबाट नेपाल हुँदै भारत जाँदा सजिलो पर्नेछ। त्यसैले पनि यो कुरा बुझेका भारतका विद्वान राहुल सांकृत्यायन चीन भ्रमणको मनसुबा बोकी धेरैपटक नेपाल आए। पछि उनले चीन जाने सजिलो बाटो लद्दाखतर्फ पत्ता लगाए पनि उनले नेपालको यात्रा महत्त्वपूर्ण ठाने। उनले नेपाललाई दुइटा कुराम
उमाशङकर द्विवेदी आस्तिकको इच्छाअनुसार राजा जनमेजयको आज्ञाले सर्पहरूको नाश गर्ने सर्पयज्ञ समाप्त भयो। आस्तिकले आफ्नो मामाको घरमा गएर सर्पयज्ञको समाप्तिको सुखद समाचार सुनाए। आस्तिक मामाघर पुगेको बेला सर्पयज्ञमा होमिनबाट जोगिएका सर्पहरूबाट वासुकीनागको सभा भरिएको थियो। आस्तिकको मुखबाट सर्पयज्ञ समाप्त भएको खबर सुनेर सभामा उपस्थित सर्पहरू अत्यन्त प्रसन्न भए। उनीहरूले प्रेम प्रकट गर्दै आस्तिकसित भने,“बाबू, तिमीले हामी नाग र सर्पहरूलाई मृत्युको मुखबाट बचायौं। तिमीसित हामीहरू अत्यन्त प्रसन्न छौं। यस बेला तिम्रो मनमा जे इच्छा लाग्दछ, वर माग। भन तिमीलाइ के मन पर्छ, हामी तिम्रो कुन प्रिय काम गरौं ?” सर्पहरूको कुरा सुनेर आस्तिकले भने,“तपाईंहरू मसित प्रसन्न हुनुहुन्छ भने म वर माग्दछु, जो कोहीले साँझ वा प्रातकालमा प्रसन्नतापूर्वक यस धर्ममय उपाख्यानको पाठ गरेमा उसलाई सर्पभय नहोस्।” आस्तिकको वचन सुनेर सर्पहरू अत्यन्त प्रसन्न भई भने,“बाबू, तिम्रो यो इच्छा पूर्ण होओस्। हामीहरू बडो प्रेम र नम्रताका साथ तिम्रो मनोरथ पूर्ण गर्नेछौं। जसले असित, आर्तिमान र सुनीथ मन्त्रहरूमध्ये कुनै एकको दिन वा रातिमा प
चिकित्सकको लापरवाही: महिलाको पेटभित्र कपास
प्रस, वीरगंज, १२ वैशाख/ पर्सा जिल्ला गोविन्दपुर गाविसको रानीगंज निवासी प्रभावतीदेवीको शल्यक्रिया गरी नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पतालका चिकित्सकले उनकोपेटबाट २ सय ग्रामको कपास निकालेका छन्। प्रभावती देवीले भारतको रक्सौल, कौडिहारचोकस्थित डा. अहमद कलामको नर्सिङ होममा पाठेघरको शल्यक्रिया गराएकी थिइन्। गत तीन मार्चमा गरिएको सो शल्यक्रियापछि उनलाई पेट दुख्ने समस्या भएको र आज उनको शल्यक्रिया गर्दा पेटबाट कपास निकालिएको हो। रक्सौलका चिकित्सक कलामले शल्यक्रिया गर्दा सो कपास पेटमैं छोडेका थिए। डा. कलाम मेडिसिनका डाक्टर हुन् र उनले सर्जनका काम गरेका थिए । नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पतालमा प्रभावती देवीको शल्यक्रिया डा. चित्तरञ्जन साहले गरेका थिए।
सार्वजनिकस्थलमा प्रहरीले दुव्र्यवहार गर्न पाउँछ ?– पीडित छात्र
प्रस, वीरगंज, १२ वैशाख/ कक्षा ७ मा अध्ययनरत अरुण साहले प्रहरीविरुद्ध लिखित उजुरी दिएका छन्। अनाहकमा जिप्रका पर्साका प्रहरी जवान राजु गुरुङले वैशाख ९ गते साँझ आफूलाई सार्वजनिकस्थलमा दुव्र्यवहार गरेकोविरुद्धमा प्रहरी उपरीक्षक पीताम्बर अधिकारीलाई भेटेर मौखिक उजुरी गर्दा पीडकमाथि कुनै कारबाई नभएपछि छात्र साहले लिखित उजुरी दिएका हुन्। उनले प्रहरी उपरीक्षक अधिकारीसँग भेट गरी आफूलाई प्रज गुरुङले सडकमा धक्का दिएको र किन धक्का दिनुभएको भनी सोध्दा अपशब्द प्रयोग गरेर दुव्र्यवहार गरेको भनी तत्कालै मौखिक उजुरी गरेका थिए। पीडकमाथि कारबाई गर्ने आश्वासन दिएको भए तापनि हालसम्म कुनै कारबाई नभएपछि लिखित उजुरी दिएको छात्र साहले बताएका छन्। प्रउ अधिकारीले सो सम्बन्धमा बुझेर कारबाई गर्न प्रनि मनोहर भट्टको जिम्मा लगाएपनि भट्टले कुनै कारबाई नगरेको भन्दै छात्र साह असन्तुष्ट बनेका हुन्। साहले आफूसँग दुव्र्यवहार गर्ने प्रजविरुद्ध कारबाई हुनुपर्ने माग गरेका छन्। छात्र साहले दुव्र्यवहार गर्ने प्रहरीले माफी माग्नुपर्ने अथवा उनलाई कसुर अनुसारको सजाय दिनुपर्ने अडान राखेका छन्। प्रनि भट्टले आममान
ग्राहकको मन जित्दै परवानीपुरमा ‘वाइवाको होटल’
राधेश्याम पटेल, परवानीपुर, १० वैशाख/ वीरगंज–पथलैया सडकखण्ड अन्तर्गत परवानीपुरमा सञ्चालित ‘वाइवाको होटल’ ले स्थानीय र सो क्षेत्र भएर आवतजावत गर्नेहरूको मन जित्न सफल भएको छ। उक्त सडकखण्डका यात्रुदेखि सवारीचालक र स्थानीय बासिन्दाले समेत खाना खानु पर्दा परवानीपुरस्थित ‘वाइवाको होटल’ सम्झन्छन्। ज्योति फर्मअगाडि रहेको उक्त होटल अगाडि खाना खान साइकल चढ्नेदेखि लिएर कार चढ्नेसम्मको भीड लाग्ने गर्छ। एकपटक खाना खाएपछि अर्कोपटक उक्त होटलमा खाना खान आउन लालायित हुने गरेको सो होटलमा फेला परेका सेवाग्राहीहरूले बताए। सिन्धुपाल्चोक, कोरो गाउँ–२ स्थायी घर भई ४८ वर्षसम्म परवानीपुर ज्योति फर्ममा क्यान्टिन चलाएका राम सिंह पाख्रिन ‘वाइवा’ हाल ६७ वर्षका छन्। उनले विगत २३ वर्षदेखि ज्योति फर्मनजिकै परवानीपुरस्थित राजमार्गमा खानाको होटल सञ्चानल गर्दै आएका छन्। राम सिंह पाख्रिन उर्फ वाइवा नाम र दामसँगै होटल व्यवसायमा रमाइरहेका छन्। उनले आफूले होटल व्यवसाय शुरू गरेपछि कहिल्यै पछाडि फर्केर हेर्नु नपरेको बताए। बिहान ६ बजे उठेपछि पाख्रिनकी पत्नी, छोरा, बुहारी, छोरी, नाति–नातिनीहरू खाना बनाउन
कार्यादेशबिना नै काम
रेलवे स्टेसन, बसपार्क, मानिसको भीडभाड रहने हाटबजार पाकेटमारहरूका लागि उपयुक्त स्थान हुन्। पाकेटमारहरू मौका पाउने बित्तिकै अरूको पकेट साफ गरिदिन्छन्। उनीहरूको सञ्जाल छ। एकले पिछा गरेको मालदार व्यक्तिको पकेट रित्याउन नसके अर्कैको जिम्मा लगाइदिन्छन्। पाकेटमारीबाट आएको भागबन्डामा सङ्ख्या वृद्धि हुनपुग्छ। विचरा यात्रुलाई आफ्नो पकेटको सम्पत्ति अरूले अंशभाग लगाएर पिछा गरिरहेको थाहै हुँदैन। पाकेटमारहरू कहिलेकाहीँ रङगेहात सर्वसाधारणको फेला पर्छन्। त्यतिबेला बच्न उनीहरू बडो गज्जबको नाटक गर्छन्। ‘चोर–चोर’ भन्दै एक हुल नौजवानहरू लखेटे जस्तो गर्छन्। नजिक परे पाकेटमारमाथि दुई/चार थप्पड जमाउँछन् पनि। केही मिनटमा चोर फरार। चोरचोर भन्दै मुडकी वर्षाएको अभिनय गरेर पछिपछि दौड्नेहरू त वास्तवमा चोरकै सञ्जालका सदस्यहरू हुन्छन्। साथीलाई पक्राउ पर्नबाट जोगाउन उनीहरूले यस्तो चाल चलिरहेका हुन्छन्। बाँकी बक्यौता सङ्घर्ष समितिले गौर नगरपालिकाविरुद्ध आन्दोलन चलायो। उक्त समितिले रिले अनसन हुँदै नगरपालिकाका प्रमुख र प्राविधिकहरूको कार्यकक्षमा समेत तालाबन्दी गरे। पछि समिति र नपाबीच सहमति भयो ‘एक महिनाभित
श्रीमन्नारायण मिश्र एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नववर्ष २०७० को पहिलो दिन नै उत्तरी छिमेकी राष्ट्र चीनको भ्रमणमा गए। अहिले उनी कुनै सरकारी पदमा नभएपनि पूर्वप्रधानमन्त्री तथा हाल देशको सबैभन्दा ठूलो दल एनेकपा माओवादीको अध्यक्ष रहेका कारण उनको चीन भ्रमण निकै महत्त्वपूर्ण रहेको मान्न सकिन्छ। एक साता लामो चीन भ्रमणको निहितार्थ खोज्नु आवश्यक छ। संविधानसभाको विगतको निर्वाचनमा राम्रो सफलता हासिल गरी देशको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक पार्टीको रूपमा स्थापित भएको एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष दाहालको चीनसँग राम्रो सम्बन्ध रहिआएको छ। हुन पनि चीनका महान् नेता माओत्सेतुङको विचारधारालाई अँगालेको र दश वर्षसम्म सशस्त्र सङ्घर्ष गरेको पार्टीका नेता दाहालले प्रधानमन्त्री बनेपछि सर्वप्रथम उत्तर छिमेकी राष्ट्र चीनकै भ्रमण गरे। नेपालका प्रधानमन्त्रीहरू प्राय: आफ्नो विदेश भ्रमणको थालनी भारतबाट गर्ने गर्दथे। यस अर्थमा प्रचण्डले नयाँ थालनी गरे। यो उनको अधिकार थियो। स्वेच्छाको कुरा थियो। प्रचण्डको प्रधानमन्त्रीकालमा चीनको धेरैजसो प्रतिनिधिमण्डल नेपाल पनि आए। विगतको करिब पाँच वर्ष